မိန်းကလေးများသာဖြေဆိုပါ ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » မိန်းကလေးများသာဖြေဆိုပါ …..
Posted by fatty on Oct 14, 2010 in Entertainment | 35 comments
မိန်းကလေးများ … အကယ်ရ်ျ … မင်းတို့က ယောကျာင်္းလေး တဦးဦးကို …စိတ်ဝင်စားနေပြီ (သို့) နှစ်သက်နေပြီ (သို့) ကြိုက်နေပြီဆိုလျှင် …………….
သူတို့သိအောင်မည်ကဲ့သို့ အချက်ပြကြပါသနည်း ……။
မှတ်ချက် …. ရန်မထောင်ရပါ။ အကောင်းဆုံး ကွန်မင့်ပေးနိုင်သူအား ထိုက်တန်စွာ ချီးမြှင့်ပါမည်။
ဣနြေ္ဒသိက္ခာရှိတဲ့သူက ရေလာမြောင်းပေးပေ့ါ။ နည်းနည်း ပေ့ါတဲ့သူက သိပ်ဟန်မဆောင်နိုင်ဘူး၊ ဖြီးနေတာပဲ။ ဆတ်ဆလူးခါတွေကတော့ အရမ်းကိုလိုက်ကပ်တော့တာပါပဲရှင်။ ကျွန်မထင်သလောက်ပြောတာပါ။
နာ ချစ်သူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်.. ဟီးဟီး.. တော်ယုံဆို အရှေ့ ဆက်မတိုးတော့ဘူး.. တွေ့တိုင်း နာ ချစ်သူကို ဘယ်လောက် ချစ်ကြောင်း နားငြီးအောင်ပြောပေးတယ်.. ကြာတော့ လစ်သွားကော
ဟင်.. နာ အောက်မှာ ဆက်ပြီး ကွန်မန့်တွေ မရှိပါလား.. ပြောမိတာ နဲနဲတောင် ရှက်လာပြီ.. ရေးကြအုန်းလေ.. ဘော်ဘော်တို့ရေ..
ဆူးဖြေမှာမှားနေတယ်။ ကိုဖက်တီးမေးတာ သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုန်း။ ကျွန်မကတော့ ယခုခောတ်က လူငယ်မဟုတ်လို့ အဖြေမပေးနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါ။
အန်တီနော်.. အခုမှ လူဖြစ်တာ လူမှန်း သိတတ်စဘဲ ရှိသေးတာ.. ဘယ့်နှဲ့… လူငယ် မဟုတ်ရမှာလဲ.. မမှားဘူး.. နယ်တေးတယ်.. ဟီးဟီး
ကျနော့ လုံးချင်း တပုဒ်အတွက် မေးခြင်းဖြစ်ပါသည် ။…. ကျေးဇူးပြု၇်ျပြသည့်စုံစွာဖြေပေးကြပါရန် ….
ရေလာမြောင်းပေး …ဆိုတာကို အနည်းငယ် အသေးစိတ်ဖြေပေးစေလိုပါသည်။
အခုခေတ်လူငယ်များသာဖြေရမည်ဟုမဆိုလိုပါ …. ယခုခေတ်၏ နည်းကိုသာဆိုလိုပါသည်။ ဘယ်ခေတ်ကသူမဆိုဖြေပေးကြပါ။
ရေလာအောင် မြောင်းပေးတာလေ …. ရည်စားစကား မပြောလို့ ပြောလာအောင် လမ်းကြောင်းလေးတွေ ဖွင့်ပေးလိုက်တာလေ …
ကျွန်တော့်ဂျီးတော်ကြီးကိုယ်စား ဖြေကြားခြင်ပါတယ် ထိုက်တန်စွာရမယ်ဆိုလို့ ပါ
ရေမလာရင်မလန်းဘူးလေ ဒါကြောင့် လန်းအောင်လုပ်ရမှာ ဒါကနမူနာဖြေပေးတာပါ
အဲဒီမြောင်းပေးပုံပေးနည်း ….နမူနာလေးပေးပါ ….
အန် ရေမလိုတော့ မြောင်းမပေးဖူးဘူး … သူငယ်ချင်းတွေထဲကလည်း …… အမူအရာနဲ့ အထာပေးတာလောက်ပဲသိတာ … ကြားတော့မကြားမိဘူး …. သူမြောင်းပေးတာ နှစ်ယောက်တည်းပဲ သိမှာပေါ့ … သမီးရှေ့မှာ ဘယ်ပြောမလဲလို့ …
ကောင်မလေး က ကောင်လေးကို – ရည်းစားရနေပြီလား
ကောင်လေးက – မရသေးပါဘူး ။ ငါ့လိုလူကို ဘယ်သူကကြိုက်မှာလဲ ။ ရုပ်ကလည်းဆိုးသေးတယ်
ကောင်မလေး – မဆိုးပါဘူး ။ ငါ့ သူငယ်ချင်းက ချောမှချော ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးထဲမှာ နင်က အချောဆုံးပဲ … နင့်လို ယောကျာ်းမျိုး ရရင် ငါတောင်လိုချင်သေးတယ် ။
အပ်ါက နည်းနည်းများ ပြင်းထန်သွားသလားမသိဘူးနော် … ဒါကြောင့်
ကောင်မလေး – ဟဲ့ … ငါ့ကို ကြည့်ပါဦး ငါ့ဆံပင်တွေ ပွနေလား ။ ( ငါ မျက်နှာတော်တော်ဖွေးနေလား * မိတ်ကပ်လိမ်းတာကိုလေ* )
ကောင်လေး – ကောင်းပါတယ် … လှပါတယ်
ကောင်မလေး – အဲ့ဒါကြောင့် နင်ကချစ်ဖို့ကောင်းတာ . . . သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးထဲမှာ နင့်ကို အခင်ဆုံးပဲ
ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး စကားတွေထိုင်ပြောနေတယ် …
ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို နေကြာစိ အခွံခွါပေးတယ် …
ကောင်မလေးက – နင့်ကိုငါ တော်တော်ခင်လို့နော် … ငါ ဘယ်သူမှ အဲ့လိုလုပ်ပေးဖူးတာမဟုတ်ဘူး … နင်မို့လို့
ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘန်ကို ပြောတာပါနော်။ အဲဒီတော့ ကောင်လေးကကြည့်ပြီး ချောကြောင်းလှကြောင်း ပြောမယ်၊ တဆက်ထဲ ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးက တကိုယ်တည်းပုံတွေ ဆိုတာတွေ့သွားရင် ဘာလို့တယောက်ထဲ ဖြစ်နေသလဲ လို့မေးမယ်။ နောက်တော့ကျန်တာတွေက သူ့အလိုလို ဖြစ်သွားပါမယ်။
မိန်းခလေး မဟုတ်ပေမဲ့ မိန်းခလေးလိုတွေးပြီး ဖြေတယ်ဗျာ။
ကောင်မလေးက ကောင်လေးကိုပြောလိုက်တယ်..(ကောင်မလေးက ချစ်တော့) ဟဲ့ ငါက ဦးစလမ်းမှာနေတာ..
(ကောင်လေးကို မချစ်တော့) ကောင်မလေးက ငါက ဦးတီးလမ်းမှာနေတာ.. ငါအိမ်လာလည်မလား.. အိမ်မှာ ခွေး အကောင် ၂၀ မွေးထားတယ်.. နင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမလို့.. သူတို့ သွားအယားပြေပေါ့ဟာ…
ဟီးဟီး.. တခါမှတော့ အဲလို မပြောဘူးဘူး.. ဦးဖတ်.. ဇတ်လမ်းထဲမှာ လိုရင်သုံးဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရေးပေးလိုက်သည်။
ကောင်လေးရှေ့မှာ ခပ်ပြုံးပြုံးလေး(ရှက်ပြုံးလေးပြုံးပြီး) စကားပြောတာမျိုးတို့၊ ကိုယ်တိုင်က ဖုန်းပြောချင်ပေမယ့် စမဆက်ချင်တော့ “အဆင်ပြေရင် ဖုန်းဆက်လိုက်ဦးနော်” လို့ပြောတာမျိုးတို့၊ အရေးတယူ ဆက်ဆံတာမျိုးတို့ အများကြီးပါပဲ။ မိန်းမကြိုက်တော့ မျှော်တာပေ့ါ။ ကောင်လေးက အိမ်လာလည်ရင် မလာတာကြာပြီနော် ဘာညာပေ့ါ။ သူ့က်ို ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရှိနေတာသိအောင် အရိပ်အမြွတ်ပြောရတော့မှာပေ့ါ။ ထင်တာပြောတာနော်။
ကောင်မလေးတွေက တဖတ်သတ်စိတ်ဝင်စားနေပြီဆီု အလိုလိုနေရင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ ကောင်လေးဘေးကို ရောက်ရောက်သွားတက်တယ် . တမင်သက်သက်လုပ်ယူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကောင်လေးဘေးမှာနေရင်း သူဘာလိုအပ်မလိုဆိုတာစောင့်ကြည့်တက်လာတယ် နောက် ကောင်လေးများ
ကိုယ်စိတ်ဝင်စားသလို ပြန်ပြီးစိတ်ဝင်စားနေမလားဆိုပြီး စကားတွေနဲ့ တီးခေါက်ကြည့်တက်တယ် . ကောင်လေးက ဘယ်လိုအနိုင်ကျင့်ကျင့် စိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ကျေနပ်နေတဲ့ ဟန်အမူအယာမျိုးလေးတွေပြတက်တယ် .ကောင်လေးက သတိထားပြီးကြည့်ရင် သိနိုင်လောက်တဲ့ ဣနြေ္ဒသိက္ခာ
ရှိရှိလေးနဲ့ ရေလာမြောင်းပေးတက်တာကိုတွေ့ဘူးတယ် .. (ဟီး .. ဟုတ်လားတော့ မသိဘူးနော် ကိုယ်တိုင်တော့ တစ်ခါမှ အဲလိုမလုပ်ဘူးဘူး ဇာတ်လမ်းထဲမှာသုံးဖို့ဆိုလို့ တွေ့ဘူးတာလေးကို စဉ်းစားပြီးရေးထားတာ)
နောက်ဆုံးတော့ ကိုးရီးယားကားကို တိုက်ရိုက် ပြန်ကူးရိုက်ဖို့အတွက် အချက်အလက်တွေ ရှာနေတာကိုး .. သူများကို ခေါင်းမစားခိုင်းနဲ့ .. ကိုးရီးယားကား များများ ကြည့် အဲဒီအတိုင်း ရေး .. ရိုက် .. ဒါပဲ ..
ကိုရီးယားကားကြည့်ရင် “နင့်ကိုငါချစ်တယ်” ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ ကိစ္စပြတ်နေပြီ။
comments တွေအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် …. ကျနော် စစ်တမ်းလေးတခု ကောက်ယူကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကေင်းဆုံး comment တခုကို ကျနော့ကိုစား တဦးဦးမှ မည်သူမဆို အကျိုးအကြောင်း သင့်လျှော်စွာ ရှင်းပြပြီး ရွေးပေးစေလိုပါတယ်။
မည်သို့ကျေးဇူးတုန့်ပြန်ရမည်ကိုလည်း အကြံပေးစေလိုပါတယ် ….။
အကောင်းဆုံး မှတ်ချက်ပေးဖြေကြားသူကတော့ ပန်ပန်ပါပဲ။
သူပြောတာရှင်းနေတာပါ။ ရေလာမြောင်းပေးဆိုတာကို ဝတ္ထုရေးဆရာလုပ်မယ့်သူက အကျယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုနားလည်သင့်တာပေါ့။
ဒါမှမဟုတ် ဘဝမှာ ဘယ်မိန်းကလေးက မှလာကပ်တာမခံရဘူးလို့လားကွာ။
မိန်းကလေးများက စပြီးချစ်(စိတ်ဝင်စားနေ)ပြီဆိုရင် သူတို့က ကြည့်မယ်။
စကားလေးများစပ်မိအောင်လုပ်မယ်။ ခင်မင်နေပြီးသားသူဆိုရင် အကြောင်းလေးတွေဖန်တီးလို့ ကပ်တာပေါ့ကွာ။
စကားလေးဘာလေး ခေါ်တာပေါ့ကွာ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ယောကျာင်္းလေးက အင်နေရင်
အတင်းလိုက်မလုံးတော့ဘူး။ တစ်ချို့တော့ မရမက လိုက်ကပ်မယ်။
နောက် ယောကျာင်္းလေးက တကယ်မကြိုက်မှန်းလည်းသိရော အလကားကောင်ပါဆိုပြီး စိတ်နာသွားမယ်။
ဒါကြောင့် တို့ယောကျာင်္းတွေလည်း အီချင်ရင် ကြည့်ပြီး အီ။ တစ်ချို့ကောင်မလေးတွေက စိတ်နာချက်ပြင်းတယ်။
ကျနော့ ကိုစား တဦးဦး ဆိုတော့ ကျနောက မပြောဘူးပေါ့.. ကျနော် က မေးပြီးတော့နော်.. ကျနောတော့ နော်.. ဟွင်းးးး
လင်းဝေကျော် ကတော့ပန်ပန် လို့ ရွေးချယ်ပါတယ် …. ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုရမယ်ဆိုတာ …အခြားတယောက်မှအကြံပြုစေလိုပါတယ်။
comments ပေးသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်မံပြောလိုပါတယ်။ …
ကျေးဇူးတင်ရင် တချက်လောက် ကစ်လိုက်လေ။ မိန်းခလေးဆိုရင် kiss ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့kickပေါ့။
အစ်ကိုရေ.. မပန်ပန်ကို ကျေးဇူးပြုချင်တယ်ဆိုရင် အစ်ကို့လုံးချင်းထွက်လာတဲ့အခါ မပန်ပန် ကို comment အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာတစ်ရွက်နဲ့ အစ်ကို့စာအုပ်တစ်အုပ် မေတ္တာ လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ…
ကိုဖက်တီးကတော့အလုပ်မရှိ ကြောင်ရေချိုး..ဘုန်းကြီးခေါင်းသန်းရှာ..ဆိုသလို…ပန်ပန့်ကိုအမှန်တကယ်ကျေးဇူးပြုချင်တယ်ဆို mrtv-4 ခေါ်ပြီး ပန်ပန့်ကြောင့်ကိုဖက်တီးလုံးချင်းလေးအဆင်ပြေသွားကြောင်းပလိတ်သတ်ကိုအသိပေးလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာ…
thu pyaw tar hote tar pae !
ti lae ma ti bae nae .
သိချင်ရင် ပြောပြမယ်…လောလောလတ်လတ်လေးတင် တစ်ယောက်သောသူလုပ်သွားတာ…
ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် နေကောင်းလား ဆိ်ုပြီး မက်ဆေ့ စပို့တယ်။ အဲ..သူပို့ကိုယ်ပို့ အပြန်အလှန်လေးတွေ ပို့တယ်… ပြီးတော့ ဖုန်းလေးတွေ ဆက်ကြတယ်… လမ်းရောက်ရင်းနဲ့ ဖုန်းဆက်ရင် ဘယ်နားရောက်ပြီလဲ၊ ဆင်းလိုက်ရမလားဆိုပြီး လမ်းမကြုံကြုံအောင်လုပ်ပြီး တွေ့လို့ရတယ်။ နောက်ကျတော့ ဖုန်းဆက်ပြီး အိပ်ရာနှိုးတာတို့၊ ပင်ပန်းရင် ကော်ဖီသောက်ပါတို့၊ ကြောက်လို့ပါ တို့ ဘာတို့ ညာတို့နဲ့ အဆင့်တက်လို့ရတယ်။
အသေတာခံလိုက်မယ် လုံးဝဖွင့်မပြောဘူး အသိလဲမခံနိုင်ဘူး
ဖွင့်မပြောပေမယ့် ဥဥလေးကတော့ ရိပ်မိပါတယ်နော် နိုရာလေး
ကိုဖက် ရယ်…. ပီမိုးနှင်း စာအုပ် ပြန်ရှာဖတ်လိုက်ရင် ပြီးနေတဲ့ဟာကိုများ ………….. ဟင်းးးး ဟင်းးးးး